Farta Iyo Meesha Bugtaa Is Og !. | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Farta Iyo Meesha Bugtaa Is Og !.
Abriil 13 2012 – Dhurwaa ayaa u yimid wan buuran oo geed ku xiran, is wareysi ka dib, dhurwaagii waxa uu wankii weydiiyay cidda la joogta. Wankii waxa uu u sheegay dhurwaagii inaan cidi la joogin oo ow kaligiis yahay. Dhurwaagii ayaa su’aal weydiiyayoo yiri “oo waxa kugu xiranna ma xarigbaa ?”, haa ayey jawaabtii wanku noqotay. Dhurwaagii inta yaabay ayow yiri “war wanyohow ha iga qoslinnin feeraha ayaan la’ahaye”.
Intaasi waa iga baraarujin iyo soo jiidasho indhaha akhristayaasha. Qormadaani wey koobantahay. Ma rabo inaan ku degdego arrin weli baaritaankeedu socdo sida naloo sheegay. Balse ifafaalaha si degdeg ah uga dhex muuqda ayaan isla heyn waayey. Haddaba maxey tahay arrintu.
Intii ku dhimatay Allah SWT ha u naxariisto, intii wax ku noqotayna Allah SWT ha u boogo dhayo. Aamiin. Intaas ka dib, DKG waxa ey sheegtay iney qaraxaas fulisay gabar isku soo xirtay waxyaabaha qarxa isuna muujisay iney uur laheyd ka dibna halkaas isku qarxisay. DKG waxey sheegtay iney magacaawday guddi heer wasiirro ah oo baaritaan rasmi ah ku sameeya dhacdadaas murugada badneyd. Haddana ayadoon weli guddigii baarintaanku soo saarin natiijada baaritaankooda, waxaa saxaafadda kula hadlay Villa Somalia Madaxweynaha DKG Sh. Shariif oo yiri “Qalad ka yimid Wasaaradda Warfaafinta ayaa sababay qaraxii Tiyaatarka”. Sh. Shariif waxa uu sidoo kale ku sheegay war saxaafadeedkiisa “In isaga xataa lagu casuumay, balse uu uga cudur daartay arrimo farsamo dartood”.
Wasiirka Warfaafinta DKG ah Cabdulqaadir Jaahweyn oo ka soo laabtay safar dalka dibaddiisa ah ayaa war ow saxaafadaa siiyay iska fogeeyay eedeynta Sh. Shariif, sheegyna in Wasaaradda Warfaafintu eysan wax eed ah ku laheyn qaraxii Tiyaatarka, isla markaasna ow ku martiqaaday hey’adaha ammaanka DKG ah iney ka soo qeyb galaan xafladda.
Afhayeenka AL Shabaab Sh. Cali Dheere waxa ow shaaciyay in xarakadoodu ka dambeysay qaraxii tiyaatarka, balse waxa ow beeniyay ineysan aheyn is-miidaamin ey fulisay gabari, wuxuuna sheegay in xubno ka tirsan AL Shabaab ey horay ugu sii rakibeen waxyaabaha qarxa madasha ey munaasabaddu ka dheceysay. Sh. Cali Dheere waxa ow DKG ah ku eedeeyay “iney rabaan marmarsiiyo uga dhigtaan gabdhaha muslimaadka ah ee magaalada ku dhaqan”.
Waxaa sidoo kale ka daba hadlay arrintaas Waaliga gobolka Banaadir ee Al Shabaab Sh. Cabduraxamaan oo sheegay “in qaraxii ka dhacay Tiyaatarka ay u fududeeyeen Mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan Dowladda KMG ah”.
Intaas ka dibna Duqa Magaalada Muqdisho Tarsan oo saxaafadda isna la hadlay ayaa carrabka ku adkeeyay “in dad Dowladda ka tirsan ay u fududeeyeen Al-Shabaab in qaraxu uu dhaco ayadoo xafladdu ay socoto”, isla markaasna ay jiraan “tuhunno la xiriira in rag mas’uuliyiin ah ay gacan ka geysteen in gabadha qaraxaas geysatay ay gudaha u gasho goobtaas iyadoo aan la baarin”.
Maxaa Ka Dhex Muuqda Hadalladaas ?.
Waxaad u qabtaa inta ka hadashay qaraxaan ee aan warkooda kor ku soo sheegay iney wada wareersanyihiin. Qaar u heysta iney ummaddu indho iyo dhego xirantahay oo kaliya ku qanceyso wixii qof mas’uul ahi u sheego; qaar isku dhinac ah wararkooduna is burinayaan; qaar ka sii faa’iideysanaya muranka arrintaani dhex dhigtay kooxda ay is hayaan maalinbana maalinta ka dambeeysa buufis ku sii ridaaya kooxda kale. Laakiin waxaa la yiri war jiraaba cakaaro ayow imaan.
Dad badani waxey ku leeyihiin Sh. Shariif iyo Tarsan oo safka hore ka ahaa munaasabad kasta oo Xamar ka dhaceysa, waa su’aale maxey xafladdaan uga maqnaayeen ?!. Aragtidaan ruuxeedu kuma saleysna baaritaan dhab ah, balse waxaan dhihi karnaa waa mid tixgelinteeda mudan.
Gunaanadkii waxaa hubaal ah in waxa dhacay eysan si sahal ah isaga dhicin. Haddii sugid ammaan oo dhab ahi ay ka jirtey madasha munaasabadda, haddii qolada DKG ahi ay daacad isu wada yihiin oo aysan aheyn maxeysato jagooyin aysan ehel u aheyn wada sheeganaaya rabana iney ummadda sidaas ku hoggaamiyaan, haddii Al-Shabaab aysan gacan-saar ka heysanin DKG ah ama aysan heli Karin sirta Dowladda, waxaa hubaal ah ineysan suurto gal aheyn in qaraxaas la fuliyo.
Haddaba waa taan horay akhristeyaasha ugu soo gudbiyay maqaal la yiraahdo Yaa La Iska Ilaaliyaa, Yaase La Isku Ilaaliyaa?” , ee bal aan wada dhowrno halka ay biyuhu ku xasilaan.
Musharaxa Madaxweynaha 2012 ee Somalia Qorshe Sir oo ay wada Gaareen Shiikh Shariif, Shariif Xasan, Cabdiraxmaan Faroole iyo Ambasadoor Mahiga